यी हुन् सातवटै प्रदेशमा एमालेका सम्भावित मुख्यमन्त्री - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन २३, २०७४ समय: १२:३९:३०
काठमाडौँ। प्रदेश सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा एमालेका अधिकांश नेताहरूले प्रत्येक प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाउन थालेका छन्। नेकपा एमाले भित्रका केही आकांक्षीको नाम पनि सार्वजनिक भएको छ। पहिले केन्द्रका मन्त्री बनिसकेका कतिपय चर्चित नेताहरूले समेत प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका छन्।
३३ वर्षपछि किशोरी बेच्ने अपराधी पक्राउ
छोटो अवधीमा मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ सरल काइदा
सेक्स टोयले यसरी दिन्छ स्वर्गीय आनन्द, मूल्य कति पर्ला ?
वाम एकताले अन्तर्राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरेको छ : अध्यक्ष दाहाल
उत्तर र दक्षिण कोरिया वार्ता आगामी हप्ता
नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयामको आवश्यकतामाथि जोड
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटिएका इन्जिनियरलाई ट्याबलेट
लमजुङमा दुई दिन विद्युत् : आपूर्ति बन्द हुने